Dembele Oo Xalay Dhibane U Noqday Jamaahiirta Ruushka [Sabab] %
Amaanka iyo midab-takoorka waa walaacyadda ugu badan oo ay qabaan bulshadda kubada cagta ka hor koobka aduunka ee 2018, kaasoo lagu qaban doono dalka Qabowga badan ee Ruushka 14-ka bisha June ee sanadkaan.
Xiriirka kubada cagta aduunka ee FIFA ayaa waxaa laga dalbaday inay la tacaalaan wararka ku saabsan in xidiga Barcelona ee Ousmane Dembele, ay kula kaceen taageerayaasha Ruushka, kulankii ay khasaaraha 3-1 ay kala kulmeen Faransiiska.
Dembele ayaa waxaa uu kulanka ku yimid daqiiqadii 72aad ee qeybta labaad bedal, iyadoona xiligaas kulanka uu ahaa 3-1, oo lagu lahaa wadanka marti gelin doona sanad ciyaareedka koobka aduunka ee Ruushka.
Sida laga soo xigtay wargeyska reer France ee L’Equipe, “qaylo ahayd daanyeer” oo ka dhan 20-sano jirkaan weerarka ka dheela ayaa garoonka laga maqlayay, iyadoona ay tani dhacday dabayaaqadii ciyaartaan xiisaha lahayd.
Faransiiska ayaa inuu garaaco Ruushka oo joogo St Petersburg waxay uga mahad-naqayaan Kylian Mbappe oo labo gool dhaliyay iyo ciyaaryahan Paul Pogba, kaasoo shabaqa dhex-dhigay gool Laad xur ah ahaa ama Free Kick.
Wax ka yar 80 maalmood ayaa wuxuu ka harsan yahay in shucladda koobka aduunka laga daarow adanka Ruushka, iyadooa kulanka furitaanka uu udhaxeeyo Ruushka vs Sacuudiyada, kaasoo dhici doona 14-ka bisha June ee soo socota.
Ficilkaan ay ku kaceen sida la sheegayo taageerayaasha wadanka Ruushka wuxuu sare u qaadayaa walaacii laga qabay inay dhacaan ficil midab takoorid ah, waxayna fadeexad wayn ay ku tahay maamulka isku daba riyda koobka aduunka ee Ruushka.
BarcelonaDembeleRussia vs France